LONDON(Wararka Maanta)-Magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa loo aqoonsaday magaalada ugu nolosha wanaagsan dunida.
Feyraska Korona ayaa noqday waxa go’aaminaya liiska snadkan iyo sida kaalimaha loo kala galay.
Magaalada Auckland ayaa kaalinta koobaad ka gashay magaaloyinka ugu noolasha wanaagsan, taasi oo loo aaneynayo qaabkii ay u wajahday cudurka Covid-19.
Osaka oo Japan ah ayaa gashay kaalinta labaad, halk aAdelaide oo Australia ah ay kaalinta sadaxaad soo gashay.
Caasimada Austria ee Vienna waxay hogaamineysay liiska dhowr sano oo kaalinta kowaad geli jirtay ayaa hadda 12 aad gashay , waxayna kal hore kaalmaha hore wada gali jireen magaalada Melbourne.
Liiska tobanka magaalo ee ugu noolasha wanaagsan dunida:
Liiska tobanka magaalo ee ugu noolasha xun dunida:
Related Topics:DunidaKuweeMagaalooyinkanoloshaqorilugudnews category wararkashabelle wararka maantaUguvoa wararka duhurnimoWaaWacan
Wararkii ugu Danbeeyey Sir Kusaabsan Trump oo La Kashifay & Arinta…
Wararkii ugu Danbeeyey Suntii Lagu Muday Wariyihii Ladilay oo Masar Laga…
Wararka Maanta : Al-Shabaab oo Carruur farabadan ka afduubatay Mozambique - Wararka Maanta:...